Fanavaozana ny iOS 9 rehefa mivoaka sa miandry? | Vaovao IPhone
Fanavaozana ny iOS 9 rehefa mivoaka sa miandry?
Mety hisy ny Volana Golden Master an'ny iOS 9, Ity no nataon'i Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy ary efa fantatry ny maro aminareo, iOS 9 GM dia manana vintana tsara ho toy ny fananganana izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny besinimaro andro vitsy taty aoriana.
Ny olana mahazo ny maro aminareo dia, Hanavao ny iPhone amin'ny iOS 9 ve aho sa hiandry? Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo dia tsy maintsy jerenao ireto hevitra manaraka ireto:
1 Fahaverezan'ny fahombiazan'ny fitaovana taloha
3 Mety ho glitches ao amin'ny iOS 9.0
4 Hanavao ny iPhone amin'ny iOS 9 ve aho sa tsia?
Fahaverezan'ny fahombiazan'ny fitaovana taloha
anefa iOS 9 dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahaiza-miteny avy amin'ny rafitra ary toa mahomby izany, milaza amintsika ny traikefa fa mijaly foana ireo fitaovana taloha kokoa rehefa manavao.
Amin'ity indray mitoraka ity, ny iPhone 4s indray no tena lasibatra fa raha tiantsika ankafizo izay vaovao ao amin'ny iOS 9, tsy misy safidy hafa ankoatry ny fanavaozana sy ny fiheverana fa ny fihenan'ny rafitra dia mety tsy hitovy amin'ny tamin'ny roa taona lasa izay.
Mba hanombanana tsara kokoa ity fizarana ity dia tsara kokoa ny manavao rehefa misy ny iOS 9 GM nanomboka teo raha misy ny nenina dia afaka mampihena hatrany isika amin'ny kinova farany an'ny iOS 8. Rehefa mijanona tsy manao sonia ny iOS 8 i Apple, any isika dia hamoy ny mety hiverenana.
Na dia vitsy kokoa aza ny olona manenjika ny fitaovany iOS, ny fanavaozana ny iOS 9 dia midika izany ho very fotoana mety hametrahana tweaks ianao amin'ny iPhone na iPad.
Raha iray amin'ireo mila Cydia ianao mba hampiasa betsaka ny terminal, aza manavao ny iOS 9 na amin'ny toe-javatra inona na inona, vao mainka aza raha efa nampitandrina izany i Pangu ny fitrandrahana azy dia nakaton'ny Apple.
Mety ho glitches ao amin'ny iOS 9.0
Ny kinova aloha amin'ny iOS dia misy olana foana amin'ity lafiny ity. Na dia nandritra ireo volana maro aza ny asa dia natao hamahana ireo bibikely matotra indrindra, misy foana ny zavatra izay tsy voamarika ara-potoana na ahitsy amin'ny kinova ho avy.
ny lesoka mahazatra indrindra izay mety ho hitantsika amin'ny iOS 9.0 dia mety misy ifandraisany amin'ny fifandraisana WiFi (kilasika), kely kokoa ny fiainana bateria (kilasika iray hafa), ny rindranasa izay mbola tsy nohavaozina ary tsy mandeha amin'ny laoniny na lesoka kely hita maso (zavatra tsy nadika, tsy misy elanelam-potoana sns .).
Mazava ho azy, Fantatr'i Apple izany ary ho an'izany efa miasa amin'ny iOS 9.1, ny fanavaozana lehibe voalohany izay hitondra fanatsarana lehibe amin'ny lafiny fitoniana sy fahombiazana.
Hanavao ny iPhone amin'ny iOS 9 ve aho sa tsia?
Anjaranao ny fanapahan-kevitra farany. fotsiny tsy maintsy omenao lanja ireo teboka teo aloha ary jereo hoe hatraiza ny fiatraikany eo aminao. Raha manana iPhone 6 ianao ary tsy te hanao jailbreak, dia azo antoka fa havaozinao ilay voalohany, fa raha tsy izany, ilaina ny mieritreritra tsara kokoa.
Efa zatra mahita isika fitarainana avy amin'ireo mpampiasa manavao ary avy eo diso fanantenana satria ny haavon'ny vaovao tsy dia avo loatra hahafoy ny zava-bita, ny fitoniana na ny fiovana.
Mikasa ny hanavao ny iPhone amin'ny iOS 9 ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Fanavaozana ny iOS 9 rehefa mivoaka sa miandry?
Chooviik dia hoy izy:
Mazava fa tsia, noho ny antony maro ny 1 dia ny fahaverezako ny jailbreak ary ny rafitra iOS tsy misy jailbreak dia mamela zavatra maro irina, ny 2 dia noho ny lesoka izay mitondra isan-taona ireo rafitra vaovao izay zavatra efa lasa fanao ao amin'ny Apple. , farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny fanavaozana faha-3 dia tsy mamoaka rafitra iOS tsy misy hadisoana izy ireo
Valiny amin'i Chooviik
Koa satria misy ny resaka fa miha mihakely ny jailbreak, dia tsara ny manao tatitra momba izany.
fa isika izay manana 8.4.1… ary tp dia mety hogadraina… ary ios 9 tp… ary tsy manao sonia ilay 8.4 koa izy ireo… andao hojerentsika izay ataontsika! 😀
Ny Pepe granaino dia hoy izy:
Mikasika izay voalaza ao amin'ilay lahatsoratra momba ireo fitaovana taloha… .. Nanavao ny iPad mini 1 sy ny iPhone 4s ho beta 5 aho ary ny mifanohitra amin'izay, misosa kokoa izy ireo…. Amin'ity tranga ity dia nitady ny hampihenana ny lanjan'ilay orinasa i Apple raha ny iOS 8 sy 9 no betsaka kokoa amin'ireo fitaovana ireo, tsy haiko hoe avy aiza no tsikaritr'ireo fitaovana taloha, fantatry ny olona rehetra nanandrana ny iOS 9 beta amin'ireo fa ny mifanohitra amin'izay no izy
Valiny tamin'i El Pepe granaino
Miresaka antecedents taloha aho fa tsy iOS 9 manokana.
Nataony mazava koa tamin'ny fehezan-teny voalohany fa "Na dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fihenan'ny rafitra aza ny iOS 9 nefa tsy midika izany fa ny kinova voalohany dia tsy voatsara araka ny tokony ho izy ary misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny fitaovana rehetra. Mazava ho azy fa ho tsikaritra kokoa amin'ny iPhone 4 ity fa tsy amin'ny iPhone 6.
Ny tantaran'ny fanavaozana rehetra ... miaraka amin'ny tsy fitovian'ny betas an'ny besinimaro ary ny BETAS farany farany amin'ny iOS 9 dia misy fihenam-bidy, fampisehoana ary bateria tsara lavitra noho ny iOS 8.4 na 8.4.1. Hahafinaritra ny GM, farafaharatsiny ny antenaiko dia ireo, manantena aho fa tsy hitako miaraka amina hira ao am-nify izay tsy hafahafa amin'i Apple
Eny, efa nanavao aho ary nahatsikaritra tsara ny mifanohitra amin'izay. Toy ny mahazatra dia ambany ny fampisehoana / fluidity, ary tsikaritra amin'ny fihenan-tsasatra kely amin'ny tetezamita eo amin'ny fampiharana, ny vokatra sns. Manantena aho fa hofoanany ny kinova GM. Etsy ankilany, apetrako amin'ny iPhone 6 izany.
iPhone 6s Plus: endri-javatra, famaritana, ary ny vidin'ny iPhone lehibe vaovao
Ahoana ny fomba hijerena ny keynote an'ny Apple amin'ny Windows, Android ary Linux